Cherry blossoms နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/15)
Spring in Japan means two things: cherry blossoms and flower viewing. Here we introduce famous cherry blossom viewing spots. Places across Japan celebrate the blooming of cherry trees from March to May. Come check outawide variety of different hanami (flower viewing) spots, including hanami cruises and cherry blossoms that accentuate the beauty of temples, shrines, and even Mt. Fuji.
( အနုပညာမှ တဆင့် ကမ္ဘာလောကကြီးကို လှပဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဆီသို့ ) လို့ စိတ်ကူးမှ စတင်ခဲ့တဲ့ မိဟိုပြတိုက်ဖြစ်တယ်။ ...
နိုင်ငံခြားသာခရီးသွားများအလွန်သဘောကျသောနေရာ။ ဒီ ဆန်းဟွန်တိုရိအိသည် ဘုရားကျောင်းကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများက ဆုတောင်းများပြည့်သော လေးစားမှုရှိေ...
ဖူဂျီယောရှိဒမြို့တွင်းမှာတောင် ဦးဆောင်နေတဲ့ ဖူဂျီတောင်ရဲ့ ရှုခင်းနေရာဖြစ်တယ်။ ပင်မဆောင်အနီးက ၃၉၇ ထပ်ရှိတဲ့ လှေကားကို တတ်သွားရင် ချူလဲအိေ...
ပြောရမည်ဆိုပါက (ခီရောမီဇုနော့ စင်)၏အမြင့်သည် လေးထပ်အဆောက်အဦးတစ်ခုနှင့် ညီမျှသည်။ ခီရောမီဇုဒဲရာစင်မှာ အောက်သို့ ငေးမောကြည့်ရှု့ ရသော မြို...
တန်းဘရှိရိစွတ်သည် မိယရှိရော၏ မစွတ်ဂျိမ၊ ဟိရောရှိမ၏ မိယရှိမနှင့်တကွ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရှု့ ခင်းသုံးခုအမည်ကို တန်းစီထားသော ထင်ရှားသောနေရာ။ အရှည်...
ဂခုချောဇူခုရိ ဟုခေါ်ကြသော သီးခြားတည်ဆောင်မှုပုံစံနှင့် မြို့ အနေအထားသည့် တန်ဖိုးထားခံရပြီး ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂခုချောဇူခုရိအ...
ဟခတပင်လယ်အော်တွင် ပေါ်နေသာပတ်ဝန်းကျင် ၁၂ကီလိုမီတာ၊ လူဦးရေပျမ်းမျှ ၈၀၀ ခန့် ရှိသော သေးငယ်သော ကျွန်း။ ဖုခုအိုကမြို့ နုအိနော့ဟမနော့ဟတိုဘမှ က...
ဂျပန်တွင် တစ်ခုတည်းသောသံချောင်းများဖြင့်ချိတ်ဆွဲပြုလုပ်ထားသောရထားလိုင်းအနေဖြင့် ထင်ရှားပြီး ရေနွေးငွေ့ ရထားခေါင်းများ၊ အသုံးမပြုတော့သော က...
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ ၃၀၀၀လောက်ရှိတဲ့ မီးပုံးတွေက ယခုချိန်ထိ ဟဲအိအန်းအကြီးအကဲ ဖူဂျီဝါရရ...
ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ ငှက်ကျားငှက်က ရေပူဖြင့် ဒဏ်ရာကို ကုသခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားရှိတဲ့ ရေပူစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသော စာပေပညာရှင်တွေက လာရောက်ခဲ့တ...